Fetim-pirenena Rosé: Mankalazà miaraka amin'i Chicago Rosé
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Fetim-pirenena Rosé: Mankalazà miaraka amin'i Chicago Rosé
Latitude Beverage, orinasa manavao ny marika divay nasionaly toy ny 90+ Cellars sy Lila Wines, no mitondra ny fety any Chicago amin'ity fahavaratra ity miaraka amin'ny Celebrate Chicago Rosé, divay fanontana voafetra hisotro ny vanim-potoana rehetra.
Mankalazà an'i Chicago Rosé dia noforonina tao an-tsaina ny vanin-taona mafana malal'i Chicago, natomboka tamin'ny marika manaitra izay mampiseho am-pireharehana ny lokon'ny tanàna sy ny faravodilanitra malaza. Ity divay ity dia fifangaroan'ny frantsay any Grenache, Syrah, Cin assault ary Mourvedre avy any Languedoc, France. Izy io dia mangatsiaka, mamelombelona, ​​maina ary mamoa miaraka amin'ny fofona voaroy vaovao sy serizy mena. Ampifanaraho amin'ny pizza lovia lalina, hotdog style any Chicago ary andro kamo mandry eny amoron'ny farihy.
"Manana toerana manokana ao am-pontsika i Chicago," hoy i Kevin Mehra, CEO, Latitude Beverage. “Nahazo fandraisana tsara izahay avy any afovoany andrefana rehefa nanitatra ny orinasanay tany ivelan'i New England efa ho folo taona lasa izay, nahatonga an'i Chicago ho iray amin'ireo tsenanay voalohany. Toy ny Rosé on the Water mitsangantsangana isan-taona manodidina ny Lake Michigan, ity divay ity dia mankalaza ny fahavaratra any Chicago rehefa tena mamony tokoa ny tanàna. ”
Tsy ny fankalazana an'i Chicago Rosé ihany no hankafizan'ny Chicagoans, fa hitondra soa ho an'ny fiarahamonina eo an-toerana ihany koa. Ny iray dolara isaky ny tavoahangy amidy dia hankany amin'ny Greater Chicago Food Depository, mpikambana ao amin'ny Feeding America izay mizara sakafo mitovy amin'ny 159,000 manerana an'i Cook County isan'andro. Ny varotra rosé amin'ity vanim-potoana ity dia vinavinaina hamorona $ 10,000 ho an'ny The Food Depository.
"Faly be izahay noho ireo mpiara-miasa toa ny 90+ Cellars izay manampy anay hanatsara an'i Chicago," hoy i Kate Maehr, talen'ny tale jeneraly eksekutif Greater Chicago Food Depository. “Ity fanohanana ity dia nadika ho sakafo mahasalama sy vondrom-piarahamonina faly kokoa ho an'ny rehetra.”
Mitadiava Celebrate Chicago Rosé ao amin'ny magazain'i Mariano, ary koa mpivarotra divay maro hafa any amin'ny faritra Chicago. Ny divay dia manana SRP $ 14.99 ary tonga ara-potoana eto amin'ny fetim-pirenena Rosé amin'ny Sabotsy 8 Jona.
Hivoaka ny trano fisakafoanana 50 tsara indrindra any Amerika Latina 2019
Index index tren: fitomboan'ny volana aprily, saingy fanairana ny fomba fijery iraisam-pirenena